Nagu saabsan - Tangshan X-Nature Artificial Turf Co., Ltd.
10 sano oo khibrad ah oo ku saabsan cawska macmalka ah
Tangshan X-Nature Artificial Turf Co., Ltd. waa shirkad waxsoosaar oo ku howlan cilmi baaris ， soo saarid iyo suuqgeyn cawska macmalka ah. Waxaan haynaa in kabadan 10 sano oo khibrad ah arimahan.
70000 mitir laba jibbaaran oo toddobaadle ah
Waxaan leenahay khadadka wax soo saarka ee ugu horumarsan, iyo seddex xariiq oo wax soo saar ah, oo ku qalabeysan tikniyoolajiyad xirfadeed, si otomaatig ah “nidaamka wax soo saarka, midabka ka dhig mid si siman u dhiga kana yareeya qarashka wax soo saarka. Cawska X-Nature iyadoo la adeegsanayo qalab tayo sare leh. iyo awoodda wax soosaarka waa 70000 mitir murabac toddobaadkii.
Nidaamyada tayada lagu kalsoon yahay
X-Nature cawska macmalka ah wuxuu ka helay seddex nidaam oo ku saabsan maareynta tayada iyo maareynta deegaanka iyo caafimaadka shaqada & maareynta amniga shaqsiyaadka saddexaad ee awoodda u leh gudaha. Waxaan sidoo kale ka gudubnay imtixaankii SGS oo aan u dhignaa heerka caalamiga ah. Fiberkeenu wuxuu ka gudbay tijaabooyinka khuseeya sheybaarka FIFA. marka la eego hal-abuurnimada, waxaan helnay dhowr shahaado oo patent ah oo uu soo saaray xafiiska hantida aqooneed ee gobolka.
Ku habboon ka dib nidaamka adeegga iibka
Qaybtayada adeegyada iibka kadib iyo teknolojiyadeena waxay xirfad ku leeyihiin cawskan macmalka ah muddo 10 sano ah, waaya-aragnimadeennu ma aha oo keliya bixinta alaabooyin qiimo leh, laakiin sidoo kale waxay cadeyneysaa diyaar garow buuxa ka dib adeegyada iibka 24 saacadood gudahood.